Ny toetra ara-tantaran'i Torrent dia mihodina amin'ny sorona nataon'i Horton ary nanokatra ny Nets 3-2 nanohitra ny Bucks tamin'ny fiverenana tsy mampino. - Vaovao Ambony
Ny toetra ara-tantaran'i Torrent dia mihodina amin'ny sorona nataon'i Horton ary nanokatra ny Nets 3-2 nanohitra ny Bucks niaraka tamin'ny fiverenana mahagaga.
Brooklyn netsManana isikaTeboka mifanandrifyAo amin'ny andian-dahatsoratra mifanohitraMilwaukee Bucks. Tamin’ny talata teo, nandresy tamin’ny isa 114 no ho 108 ny ekipa ary nanokatra isa 3 noho 2 tamin’ny andiany tsara indrindra tamin’ny lalao 7. Ankehitriny, ny alakamisy ho avy izao, amin’ny 9 ora sy sasany alina (Brasilia), hifarana amin’ny lalao faha-6, ESPN sy Fampiharana ESPN .
Sehatra streaming vaovao ahitana sarimihetsika, andiany, famokarana tany am-boalohany, lalao mivantana The Simpsons ary ESPN. />Mila antsipiriany bebe kokoa? kitiho eto
Ny tantara lehibe amin'ny fifaninanana dia ny fahatongavan'i James Horton sy ny zava-bita ara-tantara nataon'i Kevin Durant.
Ny lobaka 13 naratra tamin'ny lalao andiany 1 dia niverina tamin'ny laharana voalohany tamin'ny alakamisy teo satria nazava ny fepetra tsara indrindra noho ny ratra nahazo an'i Kyrie Irving tamin'ny lalao faha-4.
Nofaranan'i Horton ny lalao tamin'ny isa 5 sy fanampiana 7, tsy nahitana tifitra 6 nandramany tamin'ny fizaram-potoana voalohany ary nandeha tamin'ny antsasaky ny ora, izay famantarana ratsy indrindra tamin'ny asany, angamba ny taom-pilalaovana mahazatra na ny lalao mandroso.
Kevin Torrent dia nanana fampisehoana manan-tantara. Jersey 7 dia nandray anjara isaky ny minitra tamin'ny lalao ary nahavita tamin'ny isa 49, rebound 17, assist 10 ary tombony 15-21.
Nanararaotra ny fepetran'ny iray amin'ireo kintan'ny mpifanandrina, i Milwaukee Bucks dia nanomboka ny lalao tamin'ny tongotra teo amin'ny accelerator ary nanokatra tombony tsara tany am-boalohany. Tamin’ny fiarovan-tena mafy, nanokatra ny isa 29 noho 15 ny mpijery teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, ka nampiasa ny hafainganan’izy ireo tamin’ny “counter attack” hanasazy ny harato.
Teo amin’ny ampahefa-potoana faharoa, nanomboka niditra bebe kokoa ny lalao i Kevin Durant ka nahafaty isa 11 tamin’ny 16 azony teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, teo amin’ny minitra faha-12, saingy namirapiratra ihany koa i Giannis Antodo ounpo ka nitarika ny Bucks tamin’ny fandresen’ny faritra hafa, tamin’ny isa 30-. 28, ary tombony amin'ny 59 ka hatramin'ny 43 eo amin'ny laharana.
Teo amin’ny ampahefa-potoana fahatelo, mbola namirapiratra hatrany i Kevin Durant, nampian’i Jeff Green, tamin’ny isa 3 noho 6 tamin’ny baolina 6 teo amin’ny fizaram-potoana farany, ka ny Nets no nandrombaka ny seksiona 38 no ho 28, ka tafakatra tamin’ny fizaram-potoana faha-4 tamin’ny isa 87 noho 87. 81 ho an'ny Bucks.
Nahazo ny isa voalohany tamin'ny lalao i James Horton, saingy nitohy tamin'ny fahasahiranana lehibe teo amin'ny fakàna sary, ka nahafaha-1 tamin'ny faha-9 ary faha-0 tamin'ny faha-7 tamin'ny isa 3 tamin'ny fampisehoana ankapobeny tamin'ny ampahefa-potoana faha-3.
Nandritra ny telovolana farany teo, nanohy nanao zavatra manan-tantara i Kevin Durant, ary ny Nets dia hanohy hampitongilana ny solaitrabe mandra-piverenany aorian'ny filaharana manaitra amin'ny lobaka 7.
Nanomboka teo dia nandroso sy nahatratra fahombiazana ara-tantara ny Nets.
- Kevin Torrent:49 pts, 17 rebounds ary 10 assists
– James Horton:5 pts, 8 assists
– Jeff Green:27 pts, 7-8 3 B.T.
- Giannis Antedoga:34 pts sy 12 rebounds
Lalao andiany - Mandresy fandresena 3 noho 2
Joko 1 – Nets 115 x 107 dolara
Joko 2 – Nets 125 x 86 dolara
Joko 3 – Bucks 86 x 83 webs
Joko 4 – Bucks 107 x 96 webs
Joko 5 – Nets 114 x 108 dolara
Lalao 6 – Bucks vs. Nets: Via 17/06, 9:30 alina (Brasilia)
Lalao 7 – Nets vs. Bucks: Sab 06/19 (raha ilaina)
Amin'ny inona no hiankinan'ny fady vanim-potoana 2?
youtube hiova ho fampiharana mp3
ahoana no hahazoako karatra fanomezana amazona maimaim-poana
tranokala download maimaim-poana amin'ny sarimihetsika hd
Ahoana ny fomba fampidinana horonan-tsary amin'ny instagram
hulu maimaim-poana miaraka amin'ny mpianatra praiminisitra amazon
mijery sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet tsy misy mpikambana